ယောဂက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေ ပေးနိုင်သလဲ - Hello Sayarwon
ယောဂက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေ ပေးနိုင်သလဲ
တကယ်လို့သင်က ယောဂလေ့ကျင့်ဖို့ စီစဉ်နေတယ် ဒါမှမဟုတ် လက်ရှိမှာလည်း လေ့ကျင့်နေတယ်ဆိုရင် ယောဂရဲ့ ကောင်းကျိုးအချို့ကို ကြားဖူးနေမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ သင်က ခုမှစမယ့်သူဖြနေတာမို့ “ ဒါက စွမ်းအင်တွေ စီးဆင်းဖို့ ကူညီပေးနိုင်တယ်လေ” လို့ရှင်းပြနေတာက ယုံကြည်ဖို့ အတော်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။
ဒါဆိုရင် ယောဂက ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်။ သေချာတာတော့ ဒီအကျိုးတွေကို အချိန်တစ်ခုအကြာယောဂလေ့ကျင့်ပြီးသွားရင် မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ တွေ့ရမှာပါ။
၁။ ပျော့ပြောင်းလာခြင်းနဲ့ နာကျင်မှုတွေ သက်သာစေခြင်း
ပျော့ပျောင်းလာခြင်းဟာ ယောဂက ခန္ဓါကိုယ်ပေါ်သက်ရောက်တဲ့ အထင်ရှားဆုံး အကျိုးပါပဲ။ ယောဂသင်တန်းကို စတက်တက်ချင်းအချိန်မှာ သင့်ခြေချောင်းလေးတွေနဲ့ လက်ချောင်းတွေထိနိုင်ဖို့တောင် အတော်ရုန်းကန်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်စိတ်ရှည်ခဲ့ရင်တော့ သိသာထင်ရှားတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို တွေ့ရမှာပါ။
သင့်ခန္ဓါကိုယ်က တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အကြောတွေ လျော့လာပြီး အရင်က မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ထားတာတွေတောင် ခုဖြစ်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ပျော့ပျောင်းလာတာနဲ့တကွ သင့်အဆစ်တွေနဲ့ ကြွက်သားနာကျင်မှုတွေလည်း ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကြွက်သားကြောနဲ့ ကြွက်သားတွေက တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီး ကပ်နေတာမို့ လှုပ်ရှားရတာ ခက်နေတာပါ။
ဥပမာ- ခါးမှာ ကြပ်နေတာက ဒူးဆစ်ကို အကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်။ ပေါင်ကြောတွေတင်းနေတာကလည်း နောက်ကျောနာတာ၊ ခါးနာတာမျိုးဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကြွက်သားတွေနဲ့ သွယ်ဆက် တစ်သျှူးတွေ ဥပမာ fascia နဲ့ အရွတ်တွေ တင်းမာနေတာမျိုးက အနေအထားမမှန်တာမျိုးတွေ ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
၂။ ကြွက်သားတွေရဲ့ သန်မာမှုနဲ့ Tone ကို တိုးတက်လာစေပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ပျော့ပျောင်းမှုတွေသာ တိုးလာရုံမက သင့်ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ ကြွက်သားတွေဟာလည်း ပိုပြီးသန်မာကျစ်လျစ်လာစေဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ လုံလုံလောက်လောက လုပ်နေရတာပါပဲ။ သန်မာကျစ်လျစ်တဲ့ ကြွက်သားတွေဟာ သင့်ကို arthritis တွေနဲ့ ခါးနာမှုတွေကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး သက်ကြီးပိုင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ ချော်လဲတာတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အားကစားခန်းမတွေမှာ အလေးမခြင်းက ကြွက်သားtone တွေနဲ့ ကြွက်သားထုတွေကို အလျင်အမြန် ကြီးထွားလာစေပေမယ့် ပျော့ပျောင်းမှုကိုတော့ တိုးမလာစေပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ကြွက်သားထုတွေ ဖြည်းဖြည်းချင်းသာတိုးလာခြင်းကသာ သင့်ခန္ဓါကိုယ်အတွက် ချိန်ညှိနိုင်ဖို့ အချိန်ကို ပေးစွမ်းနိုင်တာပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဘဲ အတော်ကြာကြာနေလိုက်ရင်တောင် ကြွက်သားတွေ အားအရမ်းနည်းသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၃။ အသက်ရှူခြင်း၊ စွမ်းအင်နဲ့ တက်ကြွဖျတ်လတ်ခြင်းတွေကို တိုးတက်လာစေပါတယ်။
ယောဂဟာ ကိုယ်အနေအထားနဲ့ အသက်ရှူတဲ့ စနစ်တွေကို ပေါင်းပြီးလေ့ကျင့်ရတာပါ။ ယောဂကျင့်မယ်ဆိုရင် သင့်ခန္ဓါကိုယ်တစ်ခုတည်းကိုသာ ကျင့်နေရတာမဟုတ်ဘဲ အသက်ရှူတာနဲ့ စွမ်းအင်တွေကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မယ်ဆိုတာပါ သင်ယူရတာပါ။ ယောဂဟာ သင့်ကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပြီး အသက်ရှူတာ နှေးစေလို့ ပို့စ်တွေလုပ်ချိန်မှာ အတွင်းထဲထိ အသက်ကို ပြင်းပြင်းရှူရပါတယ်။
ဒီလို အသက်ရှူတာကို ထိန်းချုပ်ခြင်းဟာ အဆုတ်ရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းတွေကို တိုးတက်လာစေပါတယ်။ ယောဂဟာ နှာခေါင်းနဲ့ အသက်ရှူခြင်းကိုလည်း တိုးတက်စေပါတယ်။ ဒါက လေကိုစစ်လိုက်ပြီး ပူနွေးစေတာမျိုး၊ ရေဓါတ်ဖြည့်ပေးတာမျိုး၊ ဝတ်မှုန်တွေ၊ ဖုန်တွေကို ဖယ်ရှားပေးတာမျိုးနဲ့ သင့်အဆုတ်ထဲဝင်သွားမှာ မလိုလားတဲ့အရာတွေကို ဖယ်ရှားပေးတာမျိုးတွေ လုပ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ယောဂအနေအထားတွေကို လေ့ကျင့်တဲ့အခါ သင့်အဆစ်တွေက သူတို့ လုပ်နိုင်တဲ့ အနေအထားကို အစွမ်းကုန်လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာ degenerative arthritis ဒါမှမဟုတ် mitigate disability တွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၄။ ညီမျှတဲ့ ဇီဝဖြစ်စဉ်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး အလေးချိန်လျော့ကျစေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်က လုပ်တဲ့ လေ့လာမှုတစ်ခုမှာ ယောဂလေ့ကျင့်တဲ့သူတွေဟာ သူတို့ဘာတွေစားနေတာလဲဆိုတဲ့အပေါ် ပိုပြီး အာရုံစိုက်ကြပါတယ်။ ယောဂဟာ သင့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိစေပြီး ခံစားချက်တွေကို ညီမျှအောင် ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။
ဒါကလည်း သင့်ရဲ့ စားချင်စိတ်တွေ၊ ဆာလောင်မှုတွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့နေရာမှာ အကူအညီဖြစ်စေတာပါပဲ။ ယောဂအသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပြီး အရမ်းဆာလောင်နေတဲ့အချိမှာလည်း ပိုကောင်းတဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
၅။ နှလုံးသွေးကြောနဲ့ သွေးလည်ပတ်မှု ကျန်းမာစေခြင်း
ယောဂဟာ သင့်သွေးလည်ပတ်မှုကို ထိန်းချုပ်ပါတယ်။ ပုံမှန် ယောဂလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင် လက်မောင်းနဲ့ ခြေထောက်တွေကို သွေးစီးဆင်းမှုတွေ တိုးလာမှာပါ။ ယောဂဟာ နှလုံးခုန်နှုန်းကိုလည်း အေရိုးဘစ်အနေအထားထိ ထိုးမြင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
လေ့လာသူတွေကတော့ ယောဂဟာ သင့်ဆဲလ်တွေကို အောက်စီဂျင် ပိုရစေတာကြောင့် ဒါကပဲ နှလုံးသွေးကြော လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ အခြေအနေတွေကို ပိုကောင်းစေတဲ့ အကျိုးတွေ ရရှိစေတာလို့ဆိုပါတယ်။
ယောဂဟာ သွေးတွေစီးဆင်းဖို့ ခကခဲတဲ့နေရာတွေမှာလည်း သွေးကို လိုအပ်တဲ့နေရာကို အချိန်မှန်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ခြေထောက်နဲ့ တင်ပါးဆုံကွင်းကနေ နှလုံးကို ပြန်သွားတဲ့ အခြေအနေမျိုးပေါ့။ ယောဂဟာ platelets လေးတွေကို စေးကပ်မှုနည်းအောင်နဲ့ သွေးထဲက သွေးခဲဖြစ်စေတဲ့ ပရိုတိန်းလယ်ဗယ်ကို ဖြတ်တောက်ခြင်းအားဖြင့် သွေးကြဲအောင်လုပ်ပေးပါတယ်။
ဒါကပဲ နှလုံးဖောက်ပြန်တာမျိုးတွေကို လျော့ပါးစေပြီး ခြေထောက်ထဲမှာ သွေးခဲတွေ မကြာခဏဖြစ်ပေါ်ပြီး နှလုံးဆီကို ပြန်လည်စီးဆင်းသွားလို့ဖြစ်ရတဲ့ လေဖြတ်တာတွေကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ ယောဂဟာ ဟေမိုဂလိုဘင်နဲ့ သွေးနီဥဆဲလ်တွေရဲ့ လယ်ဗယ်လ်တွေကို တိုးတက်လာစေပါတယ်။
ဒါတွေကပဲ တစ်သျှူးတွေဆီ အောက်ဆီဂျင်ပို့ပေးတာမဟုတ်ပါလား။ လေ့လာမှုတစ်ခုကတော့pranayama တစ်ခုသာ သင်ယူထားတဲ့သူတွေဟာ အောက်ဆီဂျင်နည်းနည်းနဲ့လည်း လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ပိုလုပ်နိုင်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ရလာတဲ့ အကျိုးတွေဟာ ရတာလည်းမြန်သလို ကွယ်ပျောက်တာလည်းမြန်တယ်ဆိုတာ သင်ကြားဖူးနေမှာပါ။ သူတို့ရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံကို အငြင်းပွားနေကြဆဲပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ယောဂဟာ ခြွင်းချက်မရှိတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ တစ်ချိန်လုံး သန်မာစေနိုင်တဲ့ fitness လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဆိုတာတော့ အသေအချာပါပဲ။
Hello Health Group သည်ဆေးပညာအကြံပြုချက်များ၊ ရောဂါရှာဖွေအတည်ပြုချက်များနှင့် ကုသမှုများမပြုလုပ်ပေးပါ။
5 Surprising Health Benefits of Yoga. http://dailyburn.com/life/fitness/health-benefits-yoga/. Accessed August 21, 2016.
The Benefits of Yoga. http://www.osteopathic.org/osteopathic-health/about-your-health/health-conditions-library/general-health/Pages/yoga.aspx. Accessed August 21, 2016.
Yoga. http://www.webmd.com/fitness-exercise/a-z/yoga-workouts. Accessed August 21, 2016.
38 Health Benefits of Yoga http://www.yogajournal.com/article/health/count-yoga-38-ways-yoga-keeps-fit/. Accessed August 21, 2016.